E hiwere Betfair na 2000 na kemgbe ahụ egwuregwu na-enye Paris, n'ọtụtụ mba. Taa ọ bụ ọnụ ahịa mgbanwe kacha ukwuu na Paris.
Kemgbe e kere ya, Dabere na Lọndọn ma debanye aha ha n'isi obodo Britain. Agbanyeghị, na February 2016 maka osikapa, nke dikwa na Dublin isonyere.
Na Spain, njikwa ziri ezi nke ikikere ịchụ nta.
Betfair – ANYANWU NA NKWU
Betfair bu ulo ndi Britain guzobere na Paris, na-enye ezigbo ohere na usoro nke azụmahịa na ndị kachasị ewu ewu mara n'ụwa niile na Paris Stock Exchange Betfair. Ọ bụ akwụkwọ kacha buo ibu na UK ma ghọọ otu n'ime ndị kacha mma na nsọpụrụ n'ụwa niile, nakwa na Spen.
Na Miscasasdeapuestas anyị maara peeji a banyere Paris, na ọbụna ọtụtụ si Betfair. Na mgbakwunye na ọtụtụ akụkụ dị mma, ọ nwekwara ụfọdụ ọghọm nke anyị nwara ịtụgharị uche na nyocha a anyị na-enye.
Eziokwu ahụ bụ na Betfair bụ otu n'ime ọkacha mmasị anyị bụ ihe nwere ike ịghọta ngwa ngwa ma ọ bụrụ na i lee ngalaba egwuregwu nke Paris, ebe ị na-ahụ ihe niile dị elu nke usoro gara aga na ọnụ ahịa otu àgwà na bọl klas niile.
Ngwaahịa ya pụrụ iche na nke kpakpando bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na usoro ọnụahịa Paris – Mgbanwe Betfair – Na mgbakwunye na ịbụ onye mbụ ịbanye n’ahịa ahụ, ọ ka bụ onye kachasị ukwuu na kachasị mma n’ụwa..
Usoro a na - enye gị ohere ịme egwuregwu megide ndị njem ndị ọzọ ọ bụghị megide ụlọ n'onwe ya, Betfair bụ uru, ebe ọ bụ na ịnweghị ike ichegbu onwe gị maka ego dị ka ọdịmma gị, mana ha na-akwụ obere ọrụ na uru ndị ahịa ha. Mana ihe kachasị gị mkpa ... bụ na ahịa na-atụ anya inweta ohere ka mma.
jụọ, Betfair, mana ọ bụghị n ’otu oke dị ka Bet365 ma ọ bụ William Hill. Ọ bụrụ na anyị pụtara na cha cha, Betfair na-enye ọtụtụ nhọrọ na onyinye dị iche iche ma na-ahazi mkpọsa iji ruo eru dị ka onye ahịa.
azụmaahịa ọdịnala na Paris
Betfair na-enye ahụmịhe pụrụ iche maka ndị ọrụ ya, ebe ọ na-arụ ọrụ dị ka nzọ ọdịnala na Paris dị ka ebe ịzụ ahịa. Ọ ga-ekwe omume itinye Paris na a “ụlọ” ma ọ bụ megide ndị ọzọ na-egwu egwuregwu mmadụ. Iji mezuo nke a, Paris Cruz kpebiri ịkekọrịta ma ọ bụ gbanwee.
Karịa 30 egwuregwu
Egbu, ma ọ bụghị nke kacha nta, ị ga-enwe ohere ịgba karịa ihe karịrị 30 egwuregwu sitere na egwuregwu bọọlụ, Tenis ma ọ bụ basketball, nke a na-akpọkarị ice hockey, baseball, tenis, billiards.
Betfair nabatara ndị ahịa ọhụrụ na ịgba bọọlụ ịgba bọọlụ nwere ike merie 100 €, kewara na ise site na Paris na efu 20 € ọ bụla. Dị ka ndị ahịa ịkụ nzọ egwuregwu, ị nwere ohere ịhọrọ ihe dịka 30 egwuregwu dị iche iche.
Will ga - ahụ mkpuchi dị mma nke egwuregwu kachasị mkpa, mana ha nwekwara nsogbu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, tinyere ndị ọzọ, dị ka bowling, sọfụụ na akwụ ụgwọ ya. Ọ bụ ezie na ọdịnala lekwasịrị anya na egwuregwu Britain, ihe a na-enye ugbua zuru oke ma ọ bụghị nke mba ọzọ, Egwuregwu Ewupụtara.
Ma bọl nwere Betfair kachasị mma. N'egwuregwu egwuregwu, ụdị egwuregwu dị ukwuu na nkuku ụwa. Ọ bụ ezie na Betfair kacha elekwasị anya na football na England, oge a na ndị otu egwuregwu mara mma nke ukwu.
Ihe anyị masịrị bụ nhọrọ dị mma nke egwuregwu na mbido Paris ... ị nwere ike ịmepụta ụdị nke Paris: N'ime otu egwuregwu, ọnụ ọgụgụ nkuku dị na egwuregwu bọlbụ ma ọ bụ guzobe bụ otu egwuregwu ma ọ bụ ọkpọ egwuregwu dị nchebe.
Agbanyeghị na web nwere ike inwe akụkụ kachasị mma nke ụwa ọ ka mma karịa ka ọ dị. Will ga-ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ klọb niile, Asọmpị Paris na asọmpi nwoke na nwanyị; enwere m ike mee ka obi sie gị ike na ị gaghị ahụta ohere ka mma iji gbanwee Betfair Soccer Paris.
Ọ bụrụ na-amasị gị ịkụ nzọ na Spanish Njikọ, kamakwa na Bundesliga, Usoro Premier na Italian na-enweghị oge ọ bụla… a na-atụ aro ka iji ọrụ nke Betfair, onye biri na arụ ọrụ na Paris.
Paris asọmpi na uru na-eduzi
Hapụ ahịa bọọlụ, Tenis na basketball Betfair bụ asọmpi kachasị na ahịa ịgba chaa chaa. O nwekwara usoro uzo oru Turbo, nke nwere ike ime ka ịkụ nzọ egwuregwu Spanish ka mma ma ọ bụrụ na ọnụego ya dị ala karịa ọnụ ụzọ ụlọ mba ụwa ndị ọzọ. Ọ bụrụkwa na ha na-enye onyinye dị mkpa maka nnukwu ihe egwuregwu.
Alsolọ ahụ na-egosipụtakwa ọtụtụ ihe dị ndụ na Paris. Paris n'egwuregwu ma ọ bụ n'egwuregwu ahụ bụ ahụmịhe a na-agaghị agbaghara.
onye mgbaru ọsọ kacha mma
Betfair bụ otu n'ime ịgba bọl Julio Maldonado 'Maldini”, onye nta akụkọ egwuregwu bụkwa onye nkwado gọọmentị nke FC Barcelona na Arsenal na Paris Euroleague. Ọtụtụ n'ime ụwa ụwa. Gaghị achọta ezigbo akara maka ịhọrọ oke. Nlele ihuenyo. Betfair na-ewere ọnọdụ enweghị asọmpi.
Egwuregwu Betfair na-enye ọtụtụ egwuregwu bọọlụ basketball na bọọlụ Paris. Nwere ike ịchọta ihe niile, sitere na NBA na asọmpi European na Euroleague, kamakwa asọmpi na Eshia ma ọ bụ South America. Gbanwee nhọrọ dị ọnụ ala, nkwanye anyị bụ ịga na usoro usoro ihe omume Paris Betfair na nnukwu ihe omume dị ka Egwuregwu Olympic, iko mba ụwa na Europeanle Euroleague.
otu esi aha
Ọ bụrụ na ị gara na saịtị nke ụlọ a, you ga-ahụ na ihuenyo ndebanye aha ị ga-etinye ozi gbasara gị (nke di nkpa gha bu eziokwu), aha njirimara, paswọọdụ na email. Creatmepụta akaụntụ Betfair dị mfe, ọ na-ewe oge.